I-DSP Series Power Power DC-Amandla aPhezulu oMbane oNikezela ngombane we-AC|Dc Power Supply|Umlawuli weVolder - SophPower
Umphandle>Iimveliso>Amandla oMbane oPhakamileyo aMandla oMbane
lUkukhupha amandla ukuya kufikelela kwi-150kW ngeyunithi nganye, ukukhupha i-voltage ukuya kwi-1500V kunye nokukhupha okwangoku ukuya kwi-1500A.
lSebenzisa itekhnoloji ye-FPGA.
lUmgangatho weRS232 ujongano, ukhetho lwe-RS485 kunye ne-GPIB.
lIimodeli ze-CV / CC / CP ukwanelisa iindidi ezahlukeneyo zemfuno.
l3 Amaqela e-voltage, yangoku kunye namandla enkumbulo ekhawulezayo.
lNgomsebenzi wokukhumbula amandla acinywayo, khumbula iiparameter zokugqibela zokuphuma.
l16Iibits ukuchaneka okuphezulu kwe-A / D esiguquli sombane ophezulu ngokuchanekileyo kunye nolawulo lwangoku kunye nomlinganiso.
lInketho yokude ekunciphiseni ukwehla kwevolthi okubangelwa bubude beentambo.
Uchungechunge lwamandla ombane we-DSP oPhakamileyo bakwaMandla kusetyenziswa i-PWM kunye netekhnoloji yeFPGA, inezibonelelo zodidi oluthembekileyo, yokusebenza ezinzileyo, amandla phezulu, ephezulu kakhulu, amandla amakhulu, ingxolo ephantsi kakhulu, impendulo ekhawulezayo yexeshana, Ukuchaneka okuphezulu kunye nesigqibo esiphakamileyo.
Ungcelele lwe-DSP lungabonelela ngombane wokukhupha kwaye okwangoku ukuya kuthi ga kwi-1500V kunye ne-1500A ngokwahlukeneyo. Ngokusebenza kwayo okuphezulu, Uthotho lwe-DSP lwanela imfuno yokuvavanywa kwemoto ye-EV kunye ne-compressor, I-PV inverter, umoya ovuselelekayo, kuvavanyo olusemgangathweni, okanye amandla ombane ngokugqibeleleyo.